Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Mividy ny politikam-piantohana ara-pahasalamana? Aza adino ny zavatra 5
Hostpost • Vaovao momba ny fahasalamana
Sary natolotry ny shutterstock
Ny fividianana fiantohana ara-pahasalamana dia iray amin'ireo fanapahan-kevitra lehibe indrindra amin'ny fiainana, satria io dia miaro anao amin'ny fotoan-tsarotra ary miaro anao amin'ny fiakaran'ny vidim-panafody. Eloo aminao no miverina rehefa tena ilainao izany ary fiarovana ho an'ny fianakavianao amin'ny tranga mampalahelo izay misy olona mitaky ny hijanonan'ny hopitaly.
Inona no tokony ho tadiavinao rehefa mifidy politikam-pahasalamana?
Inona avy ireo teboka tena ilaina amin'ny drafitra fiantohana ara-pahasalamana matanjaka?
Inona ny politika momba ny fahasalamana namboarina ary nahoana no safidy tsara indrindra?
Saingy, ahoana no hisafidiananao ny iray izay manome ny tombontsoa rehetra tadiavinao ary ampitainao amin'ny fampanantenanao. Inona avy ireo zavatra tokony hotadiavinao rehefa misafidy politikam-pahasalamana? Andeha hojerentsika ny sasany amin'ireo hevitra manakiana izay tsy maintsy atolotry ny drafitra fiantohana ara-pahasalamana hisongadina.
Ny habe iray mifanaraka amin'ny rehetra dia tsy mitana lanja be raha resaka politika momba ny fahasalamana satria samy manana ny filany sy ny takiny avy ny tsirairay. Ny mpiantoka antoka iray dia hijery ny zavatra ilain'ny olona iray ary hanome paikady mifanaraka amin'izany. Ny politika namboarina dia hanolotra fanampin-javatra isan-karazany izay manolotra fonony fanampiny toy ny safidy hanararaotana fitsaboana ivelan'ny India, ny vola lany amin'ny hevitra faharoa, ankoatry ny hafa. Noho izany, fantaro hatrany raha misy tombontsoa toy izany atolotra na tsia ary avy eo safidio araka izany ny politikanao.
Serivisy nampiana lanja
Ny vanim-potoana niomerika, ary tsy mila mitondra kopia mafy be foana miaraka aminao. Fantaro raha manolotra serivisy ampiana lanja amin'ny endrika fampiharana iray ny mpamatsy anao izay tsy mitaky anao hitondrana antontan-taratasy momba ny fahasalamana ary ampidirina am-pilaminana amin'ny toerana iray azo aleha na aiza na aiza, na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona.
Fanapahana ny fangatahana
Izay politika momba ny fahasalamana dia tsara ihany raha toa ka malama toy ny landy ny fizotry ny fitakiana. Ampitahao hatrany ny tahan'ny famahana ny fitakiana amin'ireo mpamatsy fiantohana ary lisitra fohy fotsiny ireo izay manana rakipeo tsara raha ny amin'ny fanolorana doka famahana fangatahana maimaimpoana. Ny tsara indrindra, ny filokana tsara indrindrao dia ny mahita izay manana ekipa ao an-trano handamina ny fitakiana satria haingana kokoa izy io ary toerana iray hijanonana hamahana ny fangatahana na fifampikasohana atrehana mandritra ny fotoana fampidirana hopitaly na famotsorana.
Tombontsoa ho an'ny reny
Raha manambady ianao na mikasa ny hanambady amin'ny ho avy, ity dia zavatra iray tokony hijerenao foana amin'ny mpiantoka anao. Ny fahaterahan'ny zaza dia iray amin'ireo fotoana tsara indrindra amin'ny fiainana ary ny fananana politikan'ny fahasalamana izay manome tombony amin'ny fiterahana dia hanampy anao hankafy ny fotoana tsara indrindra amin'ny fiainana amin'ny fikarakarana ny faktiora amin'ny hopitaly mamela anao malalaka handany fotoana bebe kokoa amin'ny fianakavianao.
Ny lisitry ny hopitaly amin'ny tambajotran'ny mpiantoka dia teboka iray lehibe tokony hanananao rehefa mividy politikam-pahasalamana. Hamarino raha manana tobim-pahasalamana voalohany ao anaty lisitra misy azy ireo na voasarona na tsia ireo hopitaly akaiky anao. Safidio foana ny politikam-pitsaboana mandrakotra ny hopitaly izay mety hitondranao ny olon-tianao raha sendra hopitaly mampalahelo ianao mba hahazoana tombony be. Raha sendra izany dia tsy eo ireo hopitaly tianao lisitry ny tamba-jotra, tsy maintsy mamoaka vola any am-paosinao ianao ary mangataka famerenam-bola aorian'izay izay mety ho fotoana maharitra.
Ny fiantohana ara-pahasalamana dia manolotra politika mifantoka amin'ny fiarovana anao sy ny fianakavianao amin'ny ora a olana ara-pahasalamana ary miaro anao amin'ny fahasahiranana ara-bola amin'ny alàlan'ny fanomezana fandrakofana feno izay miandraikitra ny fandaniana amin'ny hopitaly rehetra nefa tsy misy sarany ny hofan-trano, nahena, na andoavam-bola.
Na salama toy inona ianao ankehitriny, rehefa mihalehibe ianao dia hiseho ny chinks ao anaty fiadiana ary ny politikam-pahasalamana no filanao tsara indrindra hiarovana anao amin'ny dingana manaraka amin'ny fiainana. Na izany aza, mba hahazoana ny tombony be indrindra amin'izany dia tsara kokoa ny miantoka fiantohana mialoha ary mankafy ny fandrakofana avo lenta amin'ny vidiny ambany.